नयां जिवन पाएका ढाइ बर्षिय बालकः दुइ पटक सर्पले टोक्दा पनी सकुशल – बबई न्यूज
बबई सम्बाददाता९ जेष्ठ २०७९, सोमबार १५:३९
बर्दिया,जेष्ठ,०९ । बर्दियामा बाबु छोरालाइनै बिषालु सर्पले टोकेको छ ।सर्पको टोकाईबाट घाइते भएका बाबु छोराको जिल्ला अस्पताल गुलरियामा उपचार भइरहेको छ ।
गत मंगलबार ३ गते बिहानको करबि ४ बजेको समयमा मस्त निन्द्रामा सुती्हेका गुलरीया नगरपालीका वडा नम्बर ७ का ३४ बर्षीय सोनु पठान र उनका ढाइ बर्षीउ छोरा अवसत खानलाइ बिषालु करेत सर्पले टोकेको जिल्ला अस्पताल गुलरियाले जनाएको छ ।
छोरालाइ पहिलेनै सर्पले टोकिसकेको थियो हामीले थाहा पाएनौ जब मलाइ टोक्यौ अनी बल्ल थाहा पाए सोनु पठानले बताउनु भयो । तत्काल मैले छोरालाइ लिइ जिल्ला अस्पतालमा पुगे । तत्काल हाम्रो उपचार शुरु भयो र बाचियो छोराको अनुहार हेर्दै पठान भावुक भए ।
बाबु सोनु पठान अहिले निको भैसकेका छन भने छोरा अवसत अस्पतालमा भर्ना रहेका छन ।अवसत खानलाइ सर्पले खुटटामा २ पटक टोकेको र उनको अवस्था चिन्ता जनक रहेको हुदा अहिले अस्पताल प्रशाशनले बिशेस निगरनीमा उपचार गरीराखेको जिल्ला अस्पतालका मेडीकल सुपरीटेन्ड सुभाष पाण्डेयले बताउनु भयो ।
करीब एक लाख बराबरको औषधि उपचार अस्पतालले निशुल्क गरेको छ ।गर्मीयाम सुरु भएयता बर्दियामा सर्पको बिगबिगी बढेको छ । दैनीकीजसो सर्पले टोकेका केश भैरहन्छ । सर्पको टोकाइबाट यस बर्ष अस्पतालमा कसैको पनी मृत्यु नभएको भन्दै दिनरात केहि नभनी सेवामा खटिएका एमरजेन्सी वार्डका टिम, नर्सीगं स्टाफ, डा. बिश्वनाथ शाह लगायत अस्पताललाइ बिश्वास गरी उपचार गर्न आउने सोनु पठानलाइ समेत पाण्डेले धन्यबाद दिनुभएको छ ।
करिब बिहानको ५ बजेको समयमा अवसत खानलाइ अस्पताल ल्याउदा स्वास लिन अफठारो भएको हुदा उनलाइ ६ दिन सम्म भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरीएको र बच्चाको अवस्था अहिले ठिक रहेको बालरोग बिशेष्ज्ञ डा. बिश्वनाथ शाहले बताउनु भएको छ । अस्पतालको सिमीत स्रोत र साधनका बावजुद आपmने टिम र बिशेष मेडीकल सुपरीटेन्ड सुभाष पाण्डेको अथक प्रयासले हामीले बच्चालाइ बचाउन सफल भयौं शाहले बताउनु भयो ।